ngu admin nge-20-08-21
Okwangoku, kukho iindlela ezi-2 ezahlukeneyo zemveliso kwimveliso ye-BOPET, enye yinkqubo yokwenza izinto, enye iyanyibilika ngokuthe ngqo. Ngaphambi kowama-2013, intengiso yayihlala ikakhulu isekwe kwinkqubo yokulungisa, ngelixa emva kuka-2013, inkqubo yokuhambisa umhlambi yaziswa. Ngokwezibalo zikaZhuo Chuang, ngoku ...
I-PX yeyona nto ibalulekileyo ingasetyenziswayo kwimveliso yonke ye-polyester, Utshintsho lomzi mveliso wayo inegalelo elibalulekileyo kushishino oluthile. ukungena ngokusesikweni kuphuhliso lwe-China lokwaneliseka kolwendlela. Okokuqala, jonga ukuhanjiswa kwe-PX yehlabathi ...
Izixhobo zeNovel yeNovel, eya kwi “2019 Suqian Green Industry Expo”
Ngomhla wamashumi amabini anesibhozo ku-Septemba, umsitho wengingqi we-2019 I-Suqian Green Industry Expo yabanjelwa ukuvulwa kweziko le-Suqian Exhibition. Umxholo wale Green Fair "luhlaza, ukudityaniswa kunye nokutsiba", Gxila kumzi mveliso oluhlaza kunye noqoqosho lwendalo ukuqhuba uthethathethwano noqoqosho ...
Usekela-Rhuluneli wePhondo le-Jiangsu undwendwela izinto zeNovel yaseGenzon
Nge-25 kaSeptemba, iNgqungquthela yePhondo yokuKhuthaza ukuKhuthaza ukuKhutshwa kweeProjekthi kwiPhondo ibibanjelwe eShuyang County, kwiShuqian City. Intlanganiso yayijolise kumgangatho wenqila kunye neeprojekthi ezigxile kwimveliso ukujonga intlanganiso yokucebisa. Abahambi abafanelekileyo bephondo ...
I-ISO9001: Ulawulo lweMigangatho yoLawulo lweMigangatho ye-2015
Nge-13 kaDisemba, i-GENZON Novel Equipment yenziwa ngeentsuku ezimbini zoqeqesho oluqhelekileyo lohlobo lwango-2015 lwenkqubo yolawulo esemgangathweni. Bebonke ngama-48 abantu abathathe inxaxheba kuqeqesho. Indawo yoqeqesho Ekuqaleni kwentlanganiso, Mnu Zhang Tao, arhente yokucebisa yaseValin, okokuqala wanika ...
Ukusukela ekubeni i-Genzon Novel Equipment igqibe ukudityaniswa kunye nokudityaniswa ngokutsha kwee-asethi kwaye iqaphela ukuqala okukuko kokuqalisa komgca wokuvelisa, kwelinye icala, iGenzon igxile ekwaziseni italente ephezulu yobuchule, ukumiselwa kwenkqubo kunye noqeqesho lwabasebenzi, kwelinye icala, yenza uphawu olutsha ...